Polycarboxylate Superplasticizer, Ihe Mgbochi - Gaoqiang
Shandong Gaoqiang New Ihe Technology Co., Ltd. hiwere na 2012, na edebanyere isi obodo nke 117 nde yuan, Ọ bụ oge a na admixture mmepụta kwadoro enterprise Aims zọpụta ume na gburugburu ebe obibi nchebe, ọkachamara na-eje ozi ihe ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ ọrụ, tụnyere sayensị nnyocha. , ngwaahịa na ahịa…
JS-104 Onyinye polycarboxylate Superplasticize ...
Kpọtụrụ anyị maka akara ngosi ụfọdụ
Dị ka mkpa gị si dị, hazie gị, ma nye gị ngwaahịa ndị ọzọ bara uru.
Anyị Sample Service
Anyị nwere ike ịnye ihe nlele maka nnwale gị maka onye ahịa anyị ochie, Maka onye ahịa ọhụụ, nnwale a na - enweta na - enweghị olile anya.
Ọrụ Teknụzụ Anyị
Anyị Company wuru a zuru ezu ihe admixture mmepụta akara, chemical analysis na nkịtị onwunwe laabu. Anyị nwere ụlọ ọrụ nyocha siri ike na mmepe gụnyere ndị dọkịta, ndị nna ukwu.
Ọrụ Arịre Anyị
Companylọ ọrụ anyị nwere usoro zuru ezu, ịnwere ike ịnweta nkwado ọkachamara, ọrụ ejiri n'aka ụlọ ọrụ anyị
192020 / Nọvemba
Jiri obi ụtọ na-eme ihe ịga nke ọma na ebe nrụọrụ weebụ na-ewu ...
Mee ka ikike dị n'ime sikwuo ike ma tinye ụgbọ mmiri --...